Qalabkee iibsadaha ayaad kugula talin kartaa cilmi-baarista muhiimka ah ee Amazon?
Ka hor inta aanad ku tusin labo qalab oo wanaagsan oo la adeegsan karo oo loogu talagalay cilmi-baarista erayga Amazon, waxaynu ku bilaabi karnaa aqoon. Nasiib darro, Amazon waligeed ma sheegayso mabaadi'da gaarka ah ama arrimo saxda ah oo loo tixgeliyo darajada A9 ee algorithm - sida matoorada raadinta waaweyn, sida Google, Yahoo, Bing, iwm.Laakiin halkan waa waxa aan si fiican u ogaan karno - hosgeldin 2019. Marka loo eego imtixaannada ugu dambeeya ee la qabanayo:
Caadi ahaanshaha cilmi-baarista Caamaha Amazon waxaa lagu arkay mar kale (ugu yaraan daqiiqad). Waxay micnaheedu tahay inaad adigu samayso sida ugu fiican si aad uga fogaato isku dheelitir la'aanta / jumlada, ama isticmaalka kiisaska hoose / sare marka ay suurtogal tahay, gaar ahaan marka ay timaado ereyada muhiimka ah.
Ka fakar xaddidaadda qiyaasta 250-aad ee lagu qiyaaso tirada guud ee ereyada muhiimka ah ee dambe. Dabcan, ma jirto xaddid adag oo lagu xaqiijinayo saraakiisha Amazon. Si kastaba ha ahaatee, waad ka sii fiicnaan lahayd dhinaca ammaanka iyo xaaladdan tixgelin.
Inay maskaxda ku hayaan, waa waqtigii lagugu tusi lahaa qaar ka mid ah ikhtiyaarradayda la tijaabiyey ee cilmi baarista erayga Amazon. Halkan waxaa ku qoran sheeko kooban oo ku saabsan qof kasta oo loo isticmaalo baaritaanka raadinta oo qoto dheer. Ugu yaraan bilaash si aad u tijaabiso kuwan. Dabcan, waxa kaliya oo adiga kugu habboon in aad go'aansatid midka aad ku qaadato liiska alaabooyinkaaga.
1. Muuqaal muhiim ah - waa qalab fiican oo kaa caawin kara cilmi-baarista muhiimka ah ee Amazon. Keyword Eye ayaa ku qanacsan xogta dhabta ah ee ay ka kooban tahay hal milyan oo macallimiin oo kala duwan oo lagu soo celiyay celceliska raadinta celceliska adiga oo si cad u tilmaamaya kuwaa iyaga ka mid ah oo laga yaabo in ay ku guulaystaan ​​shuruudaha raadinta, iyo waxa laga yaabo inay ka tirtirto liiska muhiimka ah ee muhiimka ah iyo isku-dhafka dheer-dheer.
2. Kparser - barxadkan internetka wuxuu si deg deg ah u heli karaa keywords keywords keywords iyo codsiyada wax iibsiga. Xogta ayaa la isku duubay iyadoo lagu saleynayo tirakoobyada raadinta ee raadinta iyo isbeddellada ugu dambeeyay ee maaha kaliya Amazon iyo eBay, laakiin raadinta asalka ah ee Google iyo Bing. Waxyaabaha ugu xun ee ku saabsan Kparser waa nasiib darro barnaamijkan software-ka ee online-ka ah ayaa la bixiyaa iyada oo loo marayo helitaanka lacag-bixinta oo la heli karo oo ku saleysan habka taagan.
3. Keyword Kiwi - waa qalab kale oo muhiim ah oo Amazon keyword research, taas oo si gaar ah u faa'iideysaneysa helitaanka faham qotodheer ee macquulaha 'macaamiisha'. Isticmaal database-ka ballaaran oo lagu sameeyay macluumaad dhamaystiran oo ku saabsan dhagaystayaashaada bartilmaameedka ah, doorbidiisa ugu weyn, iyo iibsashada guud ee guud - waxaa si toos ah looga soo ururiyey Amazon lafteeda, iyo sidoo kale qaababka adeegga Google,.
4. Asin Key - waa cilmi-baarista ugu dambeysa ee muhiimka ah ee aan jeclaan lahaa in aan kuu muujiyo maanta. Waxaa ka mid ah dhinacyada ugu xooggan, qalabkan adeegga internetka wuxuu leeyahay tiro balaadhan oo kala duwan oo gaar ah oo loogu talagalay siyaabo kala duwan oo loogu talagalay xarun qalabyo kala duwan. Raadi fursadaha cilmi-baarista ee muhiimka ah leh qaababka soo-baxsan ee soo socda: Amazon Products Listing SEO tool, Advanced Key Tracker, iyo su'aallaha xooggan ee Su'aalaha Soo-jeedinta. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, in asaasiga muhiimka ah ee Asiin Key Amazon raadin doonaa si fiican oo kaliya haddii aad horey u leedahay ugu yaraan fahamka aasaasiga ah ee SEO iyo mabaadiida ugu muhiimsan ee rikoodhka raadinta ecommerce algorithm.